Deeq uruuriye wadnuhu istaagay isagoo qeyb ka ahaa London Marathon | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Deeq uruuriye wadnuhu istaagay isagoo qeyb ka ahaa London Marathon
Posted by: radio himilo April 26, 2016
David Seath oo ah kabtan ciidan ayaa xirtay kabaha adidas Ultra Boost ee orodka loogu talo galay si uu uga qeyb galo orodka Marathon London, isagoo uga gol lahaa in lacag uruurin uu u sameeyo ciidanka indhoolayaasha.
Ninka reer Scotland oo 31 jir ahaa ayuuse wadnuhu istaagay isagoo ku ordaya wadada Upper Thames Street ee magaaladda London oo keliya Saddex Mile u jirtay goobtii loo idmaday in orodku ku soo dhamaado.
Durba waxaa loola cararay Isbitaalka St Thomas’, walow inyar dabadeed la baahiyay dhib wadnaha dhankiisa ka timid inuu u naf waayay.
Saaxiibaddii ayaa qorsheynaya iminka inay socod ku dhameeyaan saddexda mile ee orodka uga harsaneyd David.
James Walker-McClimens oo 34 jir ah, saraakiil wada shaqeeya iyo saaxiibo dhowna ay ahaayeen Seath ayaa furay akoon lacago loogu aruurinayo indhoolayaasha ciidanka, si uu u rumeeyo riyada saaxiibkiisii geeriyooday isagoo ololahaa wada.
David Seath oo kasoo jeeda magaaladda Cowdenbeath in Fife oo 18 mile dhanka waqooyi uga beegan caasimadda Scotland ee Edinburgh ayaa shahaadada heerka labaad ee Master-ka ka qaatay jaamacadda University of Aberdeen labo goor inta aanu 2010 tababarkiisa ciidannimo ku dhameysan xero tababar oo ku taal Sandhurst.
Waxaa la aaminsan yahay inuu ku noolaa magaaladda Plymouth oo 190 mile koonfur galbeed uga beegan magaaladdii uu orodka u soo aaday ee London.
Inta uusan geeriyoon adduun lacageed dhan £500 ayuu u aruuriyay ciidamadda indhoolayaasha, wuxuuna qeyb uga noqday tartanka orodka siduu caawin ugu helo indhoolayaasha ciidanka.
Sanaddii 2012 Claire Squires gabar lagu magacaabi jiray ayaa iyana iyadoo olole lacag uruurin ah wadda ku geeriyootay xilli ay qeyb ka aheyd tartankan London Marathon, wadnaha ayaa iyana istaagay xilli keliya 1 Mile ay gebagebada u jirtay, dhowr boqol oo talaabo meel u jirtana ay joogeen walaasheed iyada ka yareyd iyo saaxiibkeed.
Squires oo iyana 30 jir aheyd waxaa loola cararay Isbitaalkii David la geeyay ee St Thomas’ halkaasoo ay ku geeriyootay.
Page-kii loo sameeyay ee sare loogu qaadayay lacagtii ay uruurineysay ayaa gaaray kaddib dhimashadeeda £1million.
Previous: Yaya Toure oo qarka u saaran inuu seego kulanka Real Madrid
Next: Kolo Toure oo ku faraxsan inuu sii joogo Liverpool